HMF : TSY HAHOMBY NY FFM SY NY FAMPIHAVANANA – MyDago.com aime Madagascar
HMF : TSY HAHOMBY NY FFM SY NY FAMPIHAVANANA
Mahatsiaro tena ho diso izahay hoy ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF) androany tamin’ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny Larotonde Besarety raha tsy miteny indray momba ny raharaha-mpirenena. Mizotra mankaiza ny firenentsika? Ho entina mankaiza izy ity? Hoy ny fanontaniana napetrak’izy ireo. Hita mivarina any an-kady ny firenena satria madi-doha tsy azo anarina ny mpamily. Mampalahelo hoy ny HMF fa manamari-tena ary angamba mihevitra ny tenany ho anjely latsaka an-tany mihitsy aza. Koa na dia efa mihoraka azan y rehetra fa am-bava loza dia tsy mihaino fa roso ihany ny Dia. Tsy maintsy miteny izahay hoy izy ireo na hihaino na tsy hihaino ianareo mpitondra fa fadiranovana ny olona ary afaka adidy izahay eo anatrehan’ny mpiray firenena aminay manoloana izay faharavana iniana atao izao. Anankiray hoy ny HMF mampiharihary izany ny fananganana ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy(FFM) nefa koa dia mazava ny antony ikirizana fa tsy ny hisian’ny fitoniana na fihavanana no tena kendrena fa ny hanatanteraka ny kajikajy politika fotsiny ihany. Koa ambarany ho re-tany ho re-danitra hoy ny HMF fa tsy hahomby ny FFM izay anisan’ireo nampitondrain’izao fitondrana izao faisana (nisy maty, nogadraina,notevatevaina, nenjehina sy rahonana andro aman’alina) dia tsy hanaiky hampihavanin’ireo olona nanimba ny fihavanana teto ary manainga ireo manam-panahy rehetra tsy hanaiky fampihavanana sy famotsoran-keloka kitoatoa toy io fa hanohana ny ezaka efa imasoan’ny FFKM ary hiara mihevitra fampihavanana sy fifamelana tena izy fa tsy sarintsariny toy izao. Avereno amin’ny FFKM hoy ny HMF ny fahefana hanaovany ny fampihavanana. Aorian’io fifidianana io hoy izy ireo dia ho krizy vaovao no hisy eto ary hiteraka lonilony. Izahay mihitsy no hitarika ny olona hitsangana sy hijoro fa tsy izy io fifidinana io.
Manahy ny fisian’ny tafika frantsay eto
Tapitra tamin’ny taona 2008 hoy ny HMF ny cooperation militaire teo amin’ny frantsay sy Malagasy ka taiza no nanaovana izany tamin’ny tetezamita. Inona hoy izy ireo no ataon’ireo miaramila frantsay eto. Manahy izahay ny amin’ny fisian’izy ireo ary anisan’ny tsy hahavanona ny fifidianana izany. Tokony esorina eto ireo.
Hetsika amin’ny Sabotsy
Mahatsiaro ho tena diso izahay hoy ny HMF raha tsy mivavaka ho an’ny firenentsika. Noho izany ilaina ny vavaka sy ny fiarahamivavaka amin’izao fahsahiranana lalim-paka iainan’ny firenena izao. Tsy nidify an’izay efa nolazainay hatrany hatrany hoy izy ireo far aha tsy mahatsiaro tena ireo manana fahefana hamaha ny krizy dia ho tafalatsaka anaty hantsana ny firenena ary amin’ny lafiny rehetra. Noho izany dia hotanterahina etsy Antsahamanitra ny Sabotsy 09 Martsa 2013 izao manomboka amin’ny 10 ora sy sasany maraina ny fotoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny firenena. Anisan’ny hampiavaka ny hetsika ankoatra ny fanambarana ny famoahana topimaso momba ny fahamarinana. Marihina fa nitarika ny tafa ho an’ny mpanao gazety teny an-toerana ireo mpitarika ny HMF izay nahitana ny mpitandrina isany Randriamorasata Roger, Ramamonjisoa Phillibert, Maurice de dieu.
Fampihavanana aloha vao fifidianana !
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 mars 2013 7 mars 2013 Catégories Politique
Précédent Article précédent : TRATRANTSIKA NY TETI-DRATSIN-DRAJOELINA TAO ATSIMO
Suivant Article suivant : TOLO-TANANA HO AN’NY ANY ATSIMO : NITONDRA NY ANJARA BIRIKINY NY ANKOLAFY RAVALOMANANA